Tic Tac Toe 🥇 Milalao an-tserasera maimaim-poana amin'ny emulator.online
Tic Tac Toe Iza no mbola tsy nilalao tic-tac-toe? Ity dia iray amin'ireo fialamboly malaza indrindra sy mampiala voly tadidy. Ankoatra ny tsotra sy haingana, ity lalao ity dia manampy amin'ny fanatsarana tsara ny fahaizanao lojika.
Tic Tac Toe: ahoana no milalao tsikelikely? 🙂
Milalao Blackjack an-tserasera maimaim-poana, fotsiny araho ireto torolàlana manaraka ireto :
dingana 2 . Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Mila tsindrio fotsiny ianao Play ary afaka manomboka milalao ianao, misafidy ny milalao mifanohitra amin'ny masinina na milalao miaraka amin'ny namana. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny isan'ny efamira tokony hananan'ny tabilao.
Dingana 4. Get ny telo amin'ireo taila ataonao dia milahatra mitsivalana, mitsivalana na manelatra.
Misy tranokala maromaro mahavita Tic Tac Toe misy maimaim-poana. Afaka milalao robot ianao na miaraka amin'ny olona iray. Na i Google aza dia manome izany. Raha fintinina dia mila mitady "tic-tac-toe" fotsiny ianao amin'ny sehatra.
Ambonin'ny zavatra rehetra, ity lalao ity dia mety ho an'ny olona rehetra dimy taona.
Inona ilay Tic Tac Toe? 🤓
Tic Tac Toe dia lalao maodely faran'izay tsotra, izay tsy mitondra fahasahiranana lehibe ho an'ny mpilalao azy ary mora ianarana. Tsy fantatra ny niaviany, miaraka amin'ny famantarana fa mety ho nanomboka tany Ejipta fahiny izy io, izay nahitana ny lovia fanatsoahana vato, izay 3,500 XNUMX taona mahery.
Ny tanjon'ny lalao dia ny fametrahana O na telo X's amin'ny tsipika mahitsy.
Tantaran'ny Tic Tac Toe 😄
Nanjary nalaza ny lalao tao Angletera ao amin'ny Taonjato faha 19 , rehefa nivory ny vehivavy nony hariva ny andro mba hiresaka sy hanao amboradara. Na izany aza, ireo loholona, ​​satria tsy afaka nanao amboradara intsony noho ny mason'izy ireo malemy, dia nampiala voly ilay lalao izay nanova anarana Kavina sy lakroa .
Fa ny niandohan'ny lalao dia efa antitra kokoa. Fanongotana ao amin'ny Kurna tempoly tany Ejipta nahita andinin-teny momba azy nanomboka tamin'ny 14th taonjato A.K. . Saingy ny fikarohana arkeolojika hafa dia mampiseho fa ny Tic Tac Toe sy ny fialamboly maro hafa mitovy amin'izany dia novolavolaina tsy miankina amin'ny faritra samihafa indrindra amin'ny planeta : nilalao ihany koa izy ireo tany Sina taloha, Amerika talohan'ny Columbian sy ny Fanjakana Romanina, ankoatry ny hafa.
Ao amin'ny 1952, ny EDSAC Lalao amin'ny solosaina OXO novolavolaina, izay nihaika ny solosaina tamin'ny lalao Tic Tac Toe ny mpilalao. Nipoitra toy izany ny iray amin'ireo lalao video voalohany misy vaovao.
Fitsipika Tic Tac Toe 📏
Ny solaitrabe dia a andalana telo isaky ny tsanganana teraka .
Mpilalao roa no misafidy marika tsirairay avy, mazàna a boribory (O) sy lakroa (X).
Milalao mifandimby ny mpilalao, hetsika iray isaky ny anjarany , eo amin'ny habaka banga eo amin'ny solaitrabe.
Ny tanjona dia ny mahazo faribolana telo na hazo fijaliana telo misesy , na mitsivalana, mitsangana na diagonal, ary miaraka amin'izay, isaky ny azo atao, dia sorohy ny mandresy ny mpanohitra amin'ny hetsika manaraka.
Rehefa tratran'ny mpilalao ny tanjona, miampita matetika ireo marika telo.
Raha samy milalao ny tsara indrindra vitany ny mpilalao roa tonta, ny lalao dia hifarana amin'ny fisarihana foana.
Ny lojikan'ny lalao dia tsotra dia tsotra, noho izany dia tsy sarotra ny mamintina na mitadidy ireo fahafaha-manao rehetra hanaovana ny hetsika tsara indrindra, na dia be aza ny isan'ny fahafaha-manao, ny ankamaroany dia simetrika ary ny fitsipika dia tsotra.
Noho io antony io dia mahazatra be ny filalaovana lalao (na "mihantitra") ny lalao.
Mpandresy : Raha manana sombin-javatra roa misesy ianao dia apetraho ny fahatelo.
Block : Raha manana sanganasa roa misesy ny mpanohitra dia apetraho ny fahatelo hanakanana azy.
Triangle - Mamorona fotoana ahafahanao mandresy amin'ny fomba roa.
Sakano ny telozoro mpanohitra
Center : Milalao eo afovoany.
Zorony banga - Milalaova amin'ny zoro foana.
Torohevitra momba ny fomba handresena
Mba hampiharana fisainana lojika, ity fialamboly ity dia manana fika sasany izay manampy rehefa miala.
1 - Apetraho eo amin'ny zoron'ny tabilao ny iray amin'ireo marika
Eritrereto hoe nametraka ny X tao anaty zoro ny iray tamin'ireo mpilalao. Ity paikady ity dia manampy amin'ny fitaomana ny mpanohitra hanao fahadisoana, satria raha mametraka O amin'ny habaka eo afovoany na eo amin'ny sisin'ny tabilao izy dia azo antoka fa ho resy.
2 - Sakano ny mpanohitra
Na izany aza, raha mametraka O eo afovoany ny mpanohitra dia tokony hiezaka ny hametraka X amin'ny tsipika iray ianao izay tsy manana toerana malalaka eo anelanelan'ny tandindony fotsiny. Noho izany, ianao dia hanakana ny mpanohitra ary hamorona vintana bebe kokoa amin'ny fandresenao.
3- Ampitomboy ny fandresena azonao
Mba hampitomboana ny fahafahanao mandresy dia hevitra tsara foana ny mametraka ny mariky ny tsipika samihafa. Raha mametraka X roa misesy ianao dia ho hitan'ny mpanohitra anao ary hosakanany ianao. Fa raha manaparitaka ny X-nao amin'ny tsipika hafa ianao dia mampitombo ny fahafahanao mandresy.
Ahoana ny fomba hanaovana Tic Tac Toe olombelona?
Vorio ny tabilao
Misafidiana toerana malalaka sy fisaka hilalao. Avy eo, zarao hoops telo andalana sy telo andalana ny hula hoins, toy ny tabilaon'ny lalao tic-tac-toe-taratasy. Aza mamela toerana be loatra eo anelanelan'ny tadin'ny dihy.
Raha milalao ao anaty trano misy gorodona mafy ianao, mampiasa kasety hanaovana ny tabilao . Amin'ny beton, azonao atao koa ny manisy tsipika amin'ny tsaoka.
Mba tsy hisy olona haratra mandritra ny lalao dia tadiavo ny tany raha mitady lavaka, potipoti-javatra mampidi-doza (toy ny vera vaky), na karazan-doza hafa, toy ny faka sy vato.
Andramo ny manangana tabilao mihoatra ny iray raha manana mpilalao marobe ianao. Ny tsara indrindra, ny ekipa tsirairay dia tokony hanana mpandray anjara iray ka hatramin'ny telo.
Ny lalao tic-tac-toe an'ny olombelona dia azo lalaovina tsirairay na amin'ny ekipa. Amin'ny tranga faharoa dia tsy maintsy manana mpikambana telo farafaharatsiny ny ekipa tsirairay. Ny birao tsirairay dia tokony hanana ekipa roa mifaninana, ny iray amin'ny lafiny roa.
Azonao atao aza ny mamela ny ekipa manana mpilalao mihoatra ny telo, saingy hampiadana ny lalao izany ary mety ho mankaleo an'ireo mpilalao tanora kokoa.
Safidio ny ekipa hanomboka
Safidio hoe iza no hanao ny hetsika voalohany amin'ilay farantsakely na farantsakely. Safidy iray hafa ny mangataka ny ekipa tsirairay hisafidy mpitarika horaisina, izay hanomboka amin'ny vato, taratasy ary hety. Ny ekipa voalohany milalao dia hahazo X, raha ny ekipa faharoa kosa hahazo O.
Mba hahatonga ny lalao hikorontana kokoa, angataho ny mpilalao hifaninana amin'ny diany mandroso sy handray ny dingana voalohany ho an'ireo mpandresy.
Milalaova hatrany mandra-pahatongan'ny ekipa iray mameno kianja telo misesy. Omeo kitapo lamba efatra ny ekipa tsirairay. Mampiasà kitapo miloko isan-karazany mba hanavahana ny X amin'ny O. Ny ekipa tsirairay dia tokony hametraka kitapo iray eo amin'ny solaitrabe mandra-pandresen'ny iray amin'izy ireo na hisintona ny lalao. Raha manana mpandray anjara mihoatra ny iray ny ekipa dia angataho ny mpikambana iray amin'ny ekipa tsirairay hilalao amin'ny fotoana iray.
Esory ny kitapo eo amin'ny solaitrabe mba hamerenana ny lalao. Mba tsy ho leo ny mpandray anjara amin'ny filalaovana ekipa mitovy foana ny mpandray anjara, andramo ny mifanakalo azy ireo.